နေတိုး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / နေတိုး
Category Archives: နေတိုး
ဒီသီချင်းကလည်းနှင်းစက်ကကြိုးဇာတ်ကားထဲမှာနေတိုးဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးပါ တေးရေးကတော့..မိုးမိုးပါ..သီချင်းနာမည်ကိုတော့မသိပါဘူး..သိတဲ့လူရှိရင် ပြောပြပါဦး…ဒီသီချင်းအေးအေးလေးကိုMMAသူငယ်ချင်းတွေကြိုက်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..သီချင်းနာမည်ကိုတော့မပေးလို့မရလို့ဒီအတိုင်းလေးပဲပေး လိုက်တယ်နော်……….
October 31, 2009 PHOENIX@ နေတိုး 1 Comment
ဒီသီချင်းကနှင်းစက်ကကြိုးဆိုတဲ့ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားမှာပါတဲ့သီချင်းပါ..နာမည်က.. “နှင်းစက်ကကြိုး“ပါ……. ဆိုထားတာကနေတိုးနဲ့မိုးမိုးပါ…တေးရေးကတော့မိုးမိုးဖြစ်ပါတယ်……….. MMAသူငယ်ချင်းများနားဆင်နိုင်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…………………
October 31, 2009 [email protected] နေတိုး မိုးမိုး 1 Comment
Super Film Stars Show Vol-1
၀၁။ ကျန်စစ်မင်း- လူမင်း ၀၂။ သန့်ရှင်းတဲ့အချစ်- ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၀၃။ သက်မဲ့အချစ်- နေတိုး ၀၄။ ယုံပါ- ဟက်ကက်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် ၀၅။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်- သူထူးစံ၊ ဘရိတ်ကီ ၀၆။ မြန်မာနိုင်ငံမြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ်သီချင်း- အဖွဲ့ ၀၇။ ဒီကဖြင့်ချစ်လိုက်ရတာ- န၀ရတ် ၀၈။ မြတ်နိုးခြင်းမိုးတိမ်- ရဲအောင်၊ မေသန်းနု ၀၉။ ငုတ်တုတ်ရည်းစား- အောင်ရဲလင်း၊ နန်းဆုရတီစိုး ၁၀။ ကိုယ်ရဲ့ ကွက်လပ်- နိုင်းနိုင်း
March 11, 2008 mgtaryar နိုင်းနိုင်း ဘရိတ်ကီ အခွေ (အများ) ရဲအောင် နန်းစုရတီစိုး န၀ရတ် အောင်ရဲလင်း နေတိုး ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း လူမင်း ဟက်ကက် သင်ဇာဝင့်ကျော် သူထူးစံ7Comments